Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abderraouf Ben Habib Jdey
Abderraouf Jdey, oo sidoo kale loo yaqaan Farouq al-Tunisi, wuxuu muddo dheer ku lug lahaan jiray kooxaha xag jirka ah. Waxaa aad loo tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa kooxaha u shaqeeya al-Qaida iyo in uu ka qayb qaatay hawlo ah afduub/argagixis. Jdey wuxuu xiriir la lahaa argagixisaha Tunisia Faker Boussora, waxaana suuragal ah in hore ay labadu u wada dhoofi jireen.
Jdey ka tagay 1991-kii wuxuuna u haajiray Montreal, Canada, wuxuuna qaatay jinsiyadda Canada sandkii 1995-kii. Intii uu joogay Canada, wuxuu Jdey Jaamacadda Montreal ka bartay cilmiga bayoolojiga wuxuuna tagi jiray Masjidka Assunna ee ku yaal Montreal.
Jdey wuxuu ka tagay Canada sanadkii 1999-kii wuxuuna tababar iyo waayo aragnimo ku qaatay dalka Afghanistan illaa iyo sanadkii 2000. Wuxuu ka qayb qaatay dagaalkii lagula jiray Isbahaysiga Waqooyiga Afqaanistaan (Afghan Northern Alliance) wuxuuna qoray warqad isbiimeyn ah oo uu ku sheegay in uu ku talo jiro jihaad in uu ku dhinto. Xilligaasi, Jdey wuxuu ka muuqday cajal fiidiyo caan ah oo isbiimeynta ku saabsan oo mar dambe laga helay aqalka mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha al-Qa’ida sanadkii 2001.
Kaddib markii uu ku soo laabtay agagaarka Montreal sanadkii 2001-da xilligaasoo uu ku hawlanaa sidii ay kooxaha xag jirka ah uga qayb qaadan lahaayeen jihaadka, wuxuu Jdey ka tagay dalka Canada. Waxay maamulka ka cabsi qabaan in uu Jdey dib ugu soo laabto dalka Canada ama Mareykanka si uu u qorsheeyo ama qayb qaato weerar argagixiso ah.
Taariikhda Dhalashada: 30 Maajo 1965
Goobta Dhalashada: Grombalia, Tunisia
Dhererka: 6'0" (183 cm)
Miisaanka: 210 lbs (95 kg)
Calaamadaha: Calaamad ku taal foolka wajiga
Magacyada La Sheegto: Farouq Al-Tunisi, Abd Al-Rauf Bin Al-Habib Bin Yousef Al-Jiddi, Abderraouf Dey, A. Raouf Jdey, Abdal Ra'Of Bin Muhammed Bin Yousef Al-Jadi, Abderraouf Ben Habib Jeday